मुना कार्की ह’त्या काण्डः विजय चौधरीको पे’न्टीमा देखियो यस्तो ! – Khabarhouse
मुना कार्की ह’त्या काण्डः विजय चौधरीको पे’न्टीमा देखियो यस्तो !
Khabar house | २७ माघ २०७६, सोमबार १५:३९ | Comments
काठमाडौँ : ललितपुरको सानेपामा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नीको ह’त्यापछि आफैँ पनि आ’त्म ह’त्या गर्ने कामदार विजय चौधरीको पे’न्टीमा प्रहरीले र’गत र वि’र्य भेट्टाएको छ। प्राप्त सिसिटिभी फुटेजका आधारमा सोमबार बिहान १० बजेर १० मिनेटमा चौधरीले मुनालाई किचेनमा काम गरिरहेका बेला पछाडिबाट डोरीले घाँटी न्याँ’केका थिए। त्यसपछि करिब १३ मिनेट चौधरीले केगरे भन्ने सिसिटिभी फुटेजमा देखिँदैन।
१० बजेर २३ मिनेटमा चौधरीले मुनाको टाउकोमा केही चिजले सातपटक हि’र्काएको पनि सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ। त्यसपछि करिब ४५ मिनेटसम्म उनी घटनास्थलमै ओहोर दोहोर गरिरहेको देखिएको छ । सिसिटिभी फुटेज अनुसार ११ बजेर ८ मिनेटसम्म उनी किचेनमा ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ। ११ बजेर २० मिनेटमा पूर्वसचिव कार्की घरमा आइपुग्दा चौधरी झु’न्डिएको अवस्थामा देखिए भने मुना किचेनमा लडिरहेका थिए।
१० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँ’टीमा डोरीले न्याँ’केर ल’डाउनु अघि पनि किचेन बाहिर चौधरी ओहोर दोहोर गरिरहेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ । १० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँटीमा डोरीले न्याँकेर ल’डाए पछिको १३ मिनेट सम्म चौधरीले के गरे भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन । चौधरीको पे’न्टीमा र’गत र वि’र्य ल’त्पतिएको देखिएको छ । पूर्व सचिव पत्नी मुनाको मासिक श्रा’व चलिरहेको पनि प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीले घ’टनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।